STA-usoro Machine Nka na ụzụ Description -Wuxi Daya Technology Co., Ltd.
80Ton & 110 Ton C Frame Single Point Servo nkenke Punch Press
Enweghị ihe mgbochi kwa nkeji nke mmịfe
Respond kwekọrọ na swing mode
Kwekọrọ na ọrịa strok zuru ezu
Servo moto torque
5.2.1 isi bughi atụmatụ m
(1) Ewubere na usoro nhazi 9, ngwaahịa ọ bụla nwere ike ịhọrọ usoro nhazi kachasị mma maka nhazi akụkụ, Ya mere iji nweta oke arụmọrụ na oke nkenke.
(2) Tụnyere ndị omenala Punch, Ọdịdị ahụ dị mfe, n'ibu nnyefe arụmọrụ dị elu, na mmezi na-eri bụ ala
(3) Dị ka e ji mara nke ngwaahịa / ihe, na-akpụ ọsọ nke ntụmadị nwere ike belata n'oge ihe nhazi, iji nweta ezigbo akpụ ọsọ nke ngwaahịa / ihe. Ya mere iji belata mkpọtụ, belata mkpọtụ nke stampụ, melite izi ezi nke ngwaahịa na ịgbatịkwu oge ọrụ nke ọnwụ.
(4) Dabere na ngwaahịa dị iche iche na elu dị iche iche, enwere ike ịtọ ọrịa strok nke aka ike, nke na-ebelata oge stampụ ma melite arụmọrụ.
Wuru na usoro nhazi 9
5.2.2 isi bughi atụmatụ 2
Isi servo moto